နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်းနှင့်အညီအလုပ်သမားအရည်အသွေးမြင့်တင့်ရေး Labour Voices by LPN စင်တာ CPF ဖွင့်ပေး – Myanmar Live
နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်းနှင့်အညီအလုပ်သမားအရည်အသွေးမြင့်တင့်ရေး Labour Voices by LPN စင်တာ CPF ဖွင့်ပေး
June 14, 2018 - by lyju
ကုမ္ပဏီ charoen pokphand foods public company limited (သို့) CPF က အလုပ်သမားရေးရာအသံ Labour Voices by LPN ကို အလုပ်သမားများထင်မြင်ချက်ပေးနိုင်ရန်နှင့်
‘အလုပ်သမားအခွင့်အရေးမြင့်တင်ရေးကွန်ယက်ဖောင်ဒေးရှင်း-LPN’ အဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့် တိုင်ကြားမှုများရှိနိုင်စေရန်အတွက် စင်တာတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး မြင့်တင်ရေးသို့ရှေးရှူ့ပြီး ကြားနေအဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့်လွတ်လပ်စွာဖြင့် အလုပ်သမား၏ထင်မြင်ချက်များ တောင်းဆိုချက်များနှင့် တင်ပြချက်များအားလုံးကို ကုမ္ပဏီမှဝန်ထမ်းအလုပ်သမားများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ် Labour Voices ဆီသို့ ပြောဆိုဆွေးနွေးချက်များတွင် ပြောဆိုသူအတွက်အနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်စေမှုမျိုးမရှိစေပဲ လျှို့ဝှက်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Labour Voices က လူမှုမီဒီယာဖြင့် အလုပ်သမားများ အချက်အလက်များသိရှိခွင့်ရရေး ဥပဒေအတိုင်းအခွင့်အရေးအကျိုးခံစားခွင့်ရရေးနှင့် အလုပ်သမားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ သိသင့်သိထိုက်သည်ကို ပိုမိုနားလည်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်သမားအနေဖြင့်လည်း အလုပ်ခွင်နှင့်အရပ်ထဲတွင် ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့နေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် အလုပ်သဘောကို အကောင်းမြင်သဘောဆောင်သောကြောင့် ကြီးမားသောစွမ်းရည်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားနှင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်လည်း ကောင်းကျိုးသက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
LPN တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Sompong Srakaew က ကိုယ်တွေ့နှင့်အောင်မြင်မှုတွေကိုအသုံးပြုပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းရှိရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို အကူအညီနှင့်အကြံအညံများပေးသူဖြစ်ပါတယ် CPF အလုပ်သမားများဟာ Labour Voices by LPN တွင်2လတိုင်တိုင်ဖွင့်လှစ်ပြီးသောစင်တာကို နားလည်မှုရှိလာကြပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့ပါတယ် LPN မှ အလုပ်သမားဝန်ထမ်းအုပ်စုအကြီးအသေးအပေါ် နားလည်သဘောပေါက်မှုတွေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
Labour Voice က အလုပ်သမားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိလာတဲ့အခါ တိုင်ကြားနိုင်စေရန်အတွက် လမ်းဖွင့်ပေးထားပါတယ် ဥပမာ မိမိဆန္ဒအလျောက်မဟုတ်ပဲ အသက်18 နှစ်မပြည့်တဲ့ကလေးကို ခြိမ်းခြောက်ပြီးအတင်းအကျပ်အလုပ်လုပ်ကိုင်စေခြင်း မှတ်ပုံတင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ထိုင်းအစိုးရ (သို့) နေရပ်နိုင်ငံမြန်မာ လာအို ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရတို့မှထုတ်ပေးသော အလုပ်သမားဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကိုသိမ်းဆည်းခြင်း တရားမျှတမှုမရှိခြင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (သို့) ခေါင်းဆောင်များမှ တရားမျှတစွာကျင့်သုံးမှုမခံရခြင်းနှင့် အခြားသောလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရခြင်းရှိပါက labour Voice by LPN မှတစ်ဆင့် တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးမြင့်တင်ရေးကွန်ယက်ဖောင်ဒေးရှင်း-LPN ထံတွင် ထိုင်းဘာသာ 063-904-6000 နှင့် 063- 904-7111 မြန်မာဘာသာ 063-905-5500 နှင့် 063-904-5000 ကမ္ဘောဒီးယားဘာသာ 063-904-8444 နှင့် 063-905-3555 LPN CALL CENTER 02-026-3479 တို့ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
TaggedCPfoundationLPNMyanmarMyanmar live newsMyanmar newsข่าวสารข่าวแรงงานเมียนมาแรงงานแรงงานเมียนมา
‘Thailand 101’ နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသိထားသင့်သော့ ၃၂ ချက်
လူကုန်ကူးနှိမ်နင်းတိုက်ဖျက်ရေး ထူးချွန်ဆုရရှိတဲ့ LPN အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ
LPN ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပြီဆိုတာ သိပြီလား?
Previous Article ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်အရင်းနီးကပ်ဆုံးသော LPN Call Center ဝန်ဆောင်မှုများ
Next Article LPN ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပြီဆိုတာ သိပြီလား?
View all posts by lyju →